राष्ट्रिय फूटबल टोलीका प्रत्येक खेलाडीलाई पाँच लाख दिने सरकारको निर्णय
साफ च्याम्पियनसिपमा उपविजेता बनेको नेपाली राष्ट्रिय टोलीका सबै खेलाडीलाई पाँच-पाँच लाख रुपैयाँ दिने सरकारले निर्णय गरेको छ।
नेपाल साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा भारतसँग पराजित भएको छ।
साफ च्याम्पियनसिप : भारत विरुद्ध उत्रिने यी हुन् ११ खेलाडी
साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा भारत विरुद्ध उत्रिने ११ खेलाडी घोषणा गरिएको छ।
फाइनल खेलमा नेपाल र भारतका प्रशिक्षक ‘टेक्निकल एरिया’ मा बस्न नपाउने साफ च्याम्पियनसिपको फाइनल खेलमा नेपाल र भारतका प्रशिक्षक ‘टेक्निकल एरिया’ मा बस्न नपाउने भएका छन्।
साफ च्याम्पियनसिपको उपाधिका लागि भारतसँग भिड्दै नेपाल साफ च्याम्पियनसिप फूटबलको उपाधिका लागि आज नेपाल र भारत प्रतिस्पर्धा गर्न लागेका छन्।
नेपाल पहिलो पटक साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा नेपाल पहिलो पटक साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ।
छोरी भएकैले बुबाले त्यागे, सडकमा फलफूल बेचेर बनिन् राष्ट्रिय खेलाडी कुनै पनि केटी वा महिलालाई मौका, अवसर र लगानी दिँदा मैले जस्तै प्रगति गर्न सक्छन्। म भर्खर २० वर्षकी भएँ र दुई हप्ताअघि मात्रै सार्वजनिक भएको नेपालको राष्ट्रिय महिला फूटबल टिममा पर्न सफल भएकी छु।
साफ च्याम्पियनसिपका लागि नेपाली टोली घोषणा अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले साफ च्याम्पियनसिपका लागि नेपाली टोली घोषणा गरेको छ।
मैत्रीपूर्ण खेलमा बांगलादेशसँग नेपालको बराबरी (तस्वीरहरू) बांगलादेशसँगको दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपालको राष्ट्रिय महिला टोलीले बराबरी खेलेको छ।
नेपालको फिफा वरीयतामा सुधार विश्व फूटबल महासंघ (फिफा) को वरीयतामा नेपालले सुधार गरेको छ।
के हो अल्मुटाइरीको ‘राजीनामा काण्ड’भित्रकाे राजनीति? घरभित्रै मिलाउन सकिने विवाद तानिँदै जानुको कारण के हो? धेरैले यसलाई फूटबलभित्रको राजनीतिको रूप भनेका छन्, जहाँ लहरो तान्दा पहरो गर्जिने सम्भावना बढेर गएको छ।
नेपालमा साफ च्याम्पियनशिप गर्न प्रस्ताव नेपालमा साफ च्याम्पियनशिप फूटबल प्रतियोगिता आयोजना गर्न दक्षिण एसियाली फूटबल महासंघ (साफ)ले प्रस्ताव गरेको छ।
डेनमार्कलाई हराउँदै इंग्ल्यान्ड यूरो कपको फाइनलमा डेनमार्कलाई अतिरिक्त समयमा पराजित गर्दै इंग्ल्यान्ड यूरो कपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ।
अर्जेन्टिना कोपा अमेरिकाको फाइनलमा, उपाधिका लागि ब्राजिलसँग भिड्ने कोलम्बियालाई पेनाल्टी सुटआउटमा हराउँदै अर्जेन्टिना कोपा अमेरिकाको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। अब उपाधिका लागि ब्राजिलसँग भिड्नेछ।
यूरो कप : इटाली फाइनलमा प्रवेश स्पेनलाई पराजित गर्दै इटाली यूरो कपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ।
घरेलु मैदानमा भएको खेलमा पेरुलाई पराजित गर्दै ब्राजिल कोपा अमेरिकाको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ।
कोपा अमेरिका : फाइनल प्रवेशका लागि ब्राजिल र पेरु भिड्दै
कोपा अमेरिका फूटबल प्रतियोगिताको फाइनल प्रवेशका लागि भोलि बिहान ब्राजिल र पेरु भिड्न लागेका छन्।
साढे दुई दशकपछि इंग्ल्यान्ड र डेनमार्क यूरो कपको सेमिफाइनलमा
साढे दुई दशकपछि इंग्ल्यान्ड र डेनमार्क यूरो कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन्।
यूरो कप : इटाली र स्पेन सेमिफाइनलमा प्रवेश यूरो कपको गएराति भएका खेलमा बेल्जियमलाई हराउँदै इटाली र स्विट्जरल्यान्डलाई हराउँदै स्पेन सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन्।
जर्मन फूटबलर टोनी क्रुसले लिए सन्न्यास जर्मन फूटबलर टोनी क्रुसले अन्तर्राष्ट्रिय फूटबलबाट सन्न्यास लिएका छन्।
खेलाडीमा कोरोना देखिएपछि बन्द प्रशिक्षण स्थगित खेलाडीमा कोभिड-१९ को संक्रमण देखिएपछि राष्ट्रिय फूटबल टोलीको बन्द प्रशिक्षण स्थगित गरिएको छ।
यूरो कप : दुई खेलमा २३ गोल, स्विट्जरल्यान्ड र स्पेन क्वार्टरफाइनलमा यूरो कपको गएराति भएका दुई वटा प्रिक्वार्टरफाइनल खेलमा २३ गोल प्रहार गरिएको छ। गोल वर्षासँगै स्विट्जरल्यान्ड र स्पेन क्वार्टरफाइनलमा प्रवेश गरेका छन्।
बेल्जियम र चेक रिपब्लिक यूरो कपको क्वार्टरफाइनलमा बेल्जियम र चेक रिपब्लिक यूरो कपको क्वार्टरफाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। गएराति भएको खेलमा पोर्चुगललाई पराजित गर्दै बेल्जियम र नेदरल्यान्ड्सलाई पराजित गर्दै चेक क्वार्टरफाइनलमा प्रवेश गरेका हुन्।
यूरो कप : इटाली र डेनमार्क क्वार्टरफाइनलमा प्रवेश इटाली र डेनमार्क यूरो कपको क्वार्टरफाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। अस्ट्रियालाई पराजित गर्दै इटाली र वेल्सलाई पराजित गर्दै डेनमार्क क्वार्टरफाइनलमा प्रवेश गरेका हुन्।
यूरो कप : आजबाट नक आउट चरणका खेल यूरोकपमा आजबाट ‘नक आउट’ चरणका खेल हुन लागेका छन्। क्वाटरफाइनल प्रवेशका लागि १६ टोली भिड्दै छन्।
एसियन कप छनोट : नेपालको समूहमा हङकङ र फिलिपिन्स एएफसी महिला एसियन कप फूटबल प्रतियोगिताको छनोटमा नेपालले हङकङ र फिलिपिन्ससँग खेल्ने भएको छ।
फुटबल खेलाडी भण्डारी उपचारका लागि कतार जाँदै, एन्फाद्वारा बिदाइ फुटबल खेलाडी सावित्रा भण्डारी उपचारका लागि कतार जान लागेकी छिन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले बुधबार बिदाइ गरेको छ।
राष्ट्रिय टोलीको बन्द प्रशिक्षणका लागि ५० खेलाडी छनोट राष्ट्रिय फुटबल टोलीको बन्द प्रशिक्षणका लागि ५० खेलाडी छनोट भएका छन्।
नेपाल एसियन कप छनोटको अन्तिम चरणमा, प्लेअफ खेल्नुनपर्ने नेपाल सन् २०२३ मा हुने एसियन कप छनोटको अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको छ। अब प्लेअफ खेल्नुनपर्ने भएको छ।
विश्वकप छनोट : नेपाल अस्ट्रेलियासँग पराजित विश्वकप २०२२ र एसियन कप २०२३ को छनोट प्रतियोगितामा नेपाल अस्ट्रेलियासँग ३-० ले पराजित भएको छ।